Waqtiga ugu Wanaagsan ee lagu dhejiyo Facebook, Instagram, Twitter, iyo LinkedIn | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Waqtiga ugu Wanaagsan ee lagu dhejiyo Facebook, Instagram, Twitter, iyo LinkedIn
Waqtiga ugu Wanaagsan ee lagu dhejiyo Facebook, Instagram, Twitter, iyo LinkedIn
Goorma ayay tahay, sida saxda ah, waa wakhtiga ugu fiican ee lagu dhajin karo warbaahinta bulshada?
Waa su'aal da'weyn. Waxaad saacado (ama bilo) ku bixisay cilmi-baadhis, maskax-ururin, abuur-abuur, tafatir, iyo turxaan-bixinta qoraalkan cusub (ama ololaha), oo hadda waxa la joogaa wakhtigii aad dunida u soo bandhigi lahayd.
Laakin sug Waa maxay wakhtiga ugu fiican? Dhammaan saacadaha ama daqiiqadaha ma siman yihiin indhaha algoorithm?
Taasi waa sababta aan u falanqeynay in ka badan 30,000 oo qoraallada warbaahinta bulshada ah si aan u aragno haddii maalmo iyo waqtiyo gaar ah ay caalami ahaan ka helayaan ka-qaybgal badan oo baraha bulshada marka loo eego kuwa kale. Halkan waxaa ah kooban oo degdeg ah oo ku saabsan waxa aan helnay, laakiin sii wad akhrinta si aad u ogaato sida loo helo waqtiyada ugu fiican ee lagu dhejiyo gaar ah dhagaystayaashaada, warshadaha, iyo aagagga wakhtiga.
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu dhejiyo warbaahinta bulshada guud ahaan waa 10:00 subaxnimo Talaado, Arbaco iyo Khamiis.
Waqtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo Facebook waa 8:00 subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo Talaado iyo Khamiis.
Waqtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo Instagram waa 11:00 subaxnimo Arbacada.
Waqtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo Twitter waa 8:00 subaxnimo maalmaha Isniinta iyo Khamiista.
Waqtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo LinkedIn waa 9:00 subaxnimo Talaado iyo Arbaco.
Laakiin waa maxay macnaha wakhtiyadan?
Haddii aad mid cusub ka bilaabayso warbaahinta bulshada oo aadan haysanin xog badan oo la soo dhaafay ama fikrado dhegaystayaal ah oo aad kula shaqayso, kuwani waa wakhtiyo qoraal ah oo wanaagsan oo lagu bilaabo. Laakiin aad bay u guud yihiin. Sida xisaabaadkaagu u koraan, waxaad u baahan doontaa inaad hagaajiso jadwalkaaga dhejinta si aad ugu habboonaato habdhaqanka dhagaystayaashaada gaarka ah. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inta ay ka duwan tahay dadweynaha guud.
Hoosta, waxaan ku tusineynaa sida aad u heli lahayd waqtiyadaada ugu fiican ee aad ku dhejiso adigoo isticmaalaya habka Hootsuite ee kooxda warbaahinta bulshada.
Bonus: Soo deji jaantuska jadwalka warbaahinta bulshada ee bilaashka ah, la beddeli karo si aad si fudud u qorsheysato oo aad u habayso dhammaan qoraaladaada horeba.
Ma jiraa runtii a ugu fiican waqtiga lagu dhejiyo baraha bulshada?
Sababtoo ah algorithms-yada newsfeed (gaar ahaan algorithm-ka Facebook iyo algorithm ​​Instagram) waxay u tixgeliyaan "soo dhawaaw" calaamad darajo weyn leh, Ku dhajinta macluumaadkaaga marka taageerayaashaadu ay online yihiin waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu hagaajin karo gaadhistaada organic.
Tani waxay noo keenaysaa warka xun: way adagtahay in lagu heshiiyo hal halbeeg "waqtiga ugu wanaagsan ee lagu dhejiyo warbaahinta bulshada." Qof kasta iyo adeerkood waxay sameeyeen daraasad ku saabsan halbeegyada warshadaha - laakiin isha dhabta ah ee runta had iyo jeer waxay ku soo noqotaa xogtaada kuwa raacsan.
Waqtiyada ugu wanaagsan ee caalamiga ah ee la soo dhejiyo sida kuwa aan ku helnay cilmi-baaristeena sare waxaa ugu wanaagsan in loo isticmaalo barta bilawga ah ee xisaabaadka cusub ee aan weli dhisin dhagaystayaal sidaas darteedna aan haysan qof lagu tijaabiyo.
Mar haddii aad hesho dhegeystayaal, si kastaba ha ahaatee, aad ayay u fududahay in la ogaado waqtiga ugu fiican ee wax lagu dhejiyo aad kanaalada warbaahinta bulshada-gaar ahaan haddii aad haysato qalabka saxda ah.
Marka hore, waxaanu kuu sheegi doonaa sida kooxdayada warbaahinta bulshada ee Hootsuite ay u heleen wakhtigoodii ugu fiicnaa si ay ugu dhajiyaan shabakad kasta oo bulsheed - dhagaystayaal qiyaastii ah 8 milyan oo taageerayaal ah. Kadib waxaan ku tusi doonaa sidaad u heli lahayd kaaga.
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu dhejiyo Facebook
Marka loo eego falanqaynteena, waqtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo Facebook waa 8:00 subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo Talaado iyo Khamiis. Tani waxay la socotaa waxa kooxda bulshada ee Hootsuite ay heleen markii ay qodeen xogtooda.
Kooxda warbaahinta bulshada ee Hootsuite, wakhtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo Facebook waa 6:15 subaxnimo iyo 12:15 galabnimo PST maalmaha shaqada.
Waxaan la sheekeysanay Hootsuite Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Bulshada Brayden Cohen si aan u ogaano sida ay faa'iidooyinku u xisaabiyaan jadwalka dhajinta ugu fiican.
Marka ay timaado Facebook, waxqabadkii hore iyo waxqabadka raacayaashu labaduba waa muhiim.
Xigasho: Kooxda Bulshada Hootsuite
Khariidadda kulaylka ee Falanqaynta Hootsuite waxay muujinaysaa in tirada ugu badan ee taageerayaashu ay yimaadaan Facebook ku dhawaad ​​duhurkii PST (3PM EST) maalin kasta. Marka loo eego tan, waxaad u maleyn kartaa in Cohen uu dhejin doono duhurkii PST.
Laakiin taasi maaha sheekada oo dhan. Marka aan xisaabta ku darsanno waxqabadkii hore ee boostada, waxaa soo baxday in kanaalka Hootsuite, uu yahay Waqtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo Facebook waa 6:15 subaxnimo iyo 12:15 galabnimo PST maalmaha shaqada.
"Waqtiyadani aad bay noogu waxtar badan yihiin, sababtoo ah tani waa marka dadku u muuqdaan inay leeyihiin nusqaamaha ugu weyn ee jadwalkooda oo ay diyaar u yihiin inay hubiyaan bulshada," ayuu yidhi Cohen.
"Waxa fiican in la dhajiyo waxa ugu horreeya subaxdii sababtoo ah tani waa marka dadku ay la socdaan war-fidiyeyaasha. Wakhtiga qadada had iyo jeer waa wax fiican sababtoo ah waa marka dadku u muuqdaan inay leeyihiin nusqaamaha ugu weyn ee jadwalkooda. Wax yar ka dib saacadaha shaqada ayaa sidoo kale waxtar leh, sababtoo ah dadku waxay hubinayaan waxa ay tabayeen maalintii. "
– Brayden Cohen, Istaraatiijiyadda Warbaahinta Bulshada
Tirakoobyada Facebook ee muhiimka ah ee maskaxda lagu hayo marka la dhajinayo:
74% dadka Maraykanka ah ee isticmaala Facebook ugu yaraan hal mar maalintii
51% dadka Maraykanka ah ee isticmaala Facebook-ga ayaa dhawr jeer maalintii
Dadku waxay celcelis ahaan ku qaataan Facebook-ga 34 daqiiqo maalintii
80% dadku waxay ku galaan Facebook iyagoo isticmaalaya mobilada kaliya (19% waxay isticmaalaan mobilada iyo desktop labadaba)
Si aad u hesho xaqiiqooyin badan, ka eeg tira-koobka Facebook-ga ugu dambeeyay iyo xogta Facebook.
Waqtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo Instagram
Waqtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo Instagram waa 11:00 subaxnimo Arbacada, sida ku cad falanqaynteena. Kooxda bulshada ee Hootsuite waxay heleen natiijooyin isku mid ah markii ay qodeen taariikhdooda dhajinta.
Kooxda warbaahinta bulshada ee Hootsuite, wakhtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo Instagram waa wakhti kasta inta u dhaxaysa 8 AM-12 PM ama 4-5 PM PST.
Waxaa laga yaabaa in aan la yaab lahayn, algorithm-ka Instagram ayaa wax badan la wadaaga Facebook-ga. Taasi waa, soo dhawayntu waa calaamadda darajada muhiimka ah. Taas oo macnaheedu yahay in hab-dhaqanka dhagaystayaashu, mar labaad, waa arrin muhiim u ah wakhtiyada la soo dhejiyo.
Inaad eegto marka taageerayaashu online joogaan waxay kaa caawin kartaa inaad bilowdo.
Si kastaba ha ahaatee, dhaqdhaqaaqa khadka tooska ah maaha ereyga ugu dambeeya ee istiraatiijiyadda.
"Instagram-ka, waxaan u isticmaalaa wax qabadkii hore sidii xiddiga hagi lahaa, ka dibna waxaan dib u eegaa marka dhagaystayaasheydu ay online yihiin ra'yi labaad. Halkaa, haddii nuxurkaygu aanu si fiican u shaqaynayn, waxaan tijaabin doonaa waqtiyo kala duwan si aan u dhejiyo si aan u arko haddii ay taasi isbeddelayso gaadhista iyo ka-qaybgalka."
Kanaalada bulshada ee Hootsuite, tani waxay la macno tahay in inta badan wakhtiyadayada dhajinta ay saf ugu jiraan subaxda hore ama wakhtiga qadada ee PST. Gudaha EST, taasi waa subaxdii (helitaanka xafiiska) ama fiidkii (ka bixista kombiyuutarka oo ay gashanayaan taleefankooda casriga ah).
Tirakoobyada muhiimka ah ee Instagram ee maskaxda lagu hayo marka la dhajinayo:
63% isticmaalayaasha Mareykanka waxay eegaan Instagram ugu yaraan hal maalin
42% isticmaalayaasha Mareykanka waxay eegaan Instagram dhowr jeer maalintii
Isticmaalka Instagram wuxuu kordhay celcelis ahaan 30 daqiiqo maalintiiba 2020, (laga bilaabo 26 daqiiqo maalintiiba 2019)
Dadku waxay ku bixiyeen celcelis ahaan 6 daqiiqo 35 ilbiriqsi booqashadiiba Instagram-ka sanadka 2019
Halkan ka arag dhammaan tirakoobyadii ugu dambeeyay ee Instagram (oo la soco tirakoobka Instagram inta aad ku jirto.)
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu dhejiyo Twitter
Waqtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo Twitter waa 8:00 subaxnimo Isniinta iyo Khamiisyo, sida ku cad falanqaynteena.
Markii kooxda bulshada Hootsuite ay eegeen xogtooda, waxay heleen natiijooyin isku mid ah (laakiin ka ballaaran): maalmaha shaqada ee 6-9 AM PST.
Marka loo eego Khabiirka Ka-qaybgalka Bulshada Nick Martin, guji-ku-gudbinta waa mitirka ugu muhiimsan ee Twitter-ka, iyo falanqaynta Hootsuite waa caddahay. Tweet-ka inta lagu jiro saacadaha xafiiska ee UK iyo East Coast waxay keenaysaa natiijooyinka ugu fiican marka la eego dhagsiga iyo ka-qaybgalka.
Xataa maalmaha sabtida iyo axada, subaxda ayaa wali ah kuwa ugu wanagsan, laakiin waxa uu jadwaleeyaa qoraalada wax yar ka dib.
"Dadku waxay bilaabayaan maalintooda. Waxay qaadanayaan subaxdii si ay ula qabsadaan maqaallada, u rogaan warbaahinta bulshada si ay war u helaan, oo ay maskaxdooda ugu diyaargaroobaan shaqada. Gelinka dambe dadku waxay ku foogan yihiin mashaariicda ama shirarka, waxayna haystaan ​​wakhti yar oo ay ku hawl galaan."
- Nick Martin, Khabiirka Ka-qaybgalka Bulshada
Si kastaba ha ahaatee, Martin ayaa sheegay in Twitter-ka, ay muhiim tahay in la xusuusto in falanqaynta diiradda saareysa "waqtiga ugu fiican ee wax lagu dhejiyo" - tusaale ahaan, mar kasta oo taageerayaasha ugu badan ay online yihiin - ay dayaci karaan dadka ku nool aagagga kale ee waqtiga.
"Waa muhiim in saacadaha lagu rusheeyo waxyaabaha ku jira," ayuu yiri Martin, "gaar ahaan haddii aad tahay calaamad leh dhegeyste caalami ah. Dadka Australiyaanka ah waxay haystaan ​​dhibaatooyin la mid ah kuwa suuqgeynayaasha warbaahinta bulshada ee Xeebta Bari ay haystaan. Haddii aad ka timid Australia, New Zealand, India, ama meel kasta oo aan ahayn UK ​​ama Waqooyiga Ameerika: waanu ku aragnaa, waxaanan isku dayaynaa in aan macluumaadka waxtarka leh ku geliyo quudintaada wakhtiga adiga kuu shaqaynaya."
Si loo gaadho dhagaystayaasha caalamiga ah ee Hootsuite, Martin waxa uu jadwaleeyaa tweets-ka saacadaha oo dhan-ma aha oo kaliya kuwa ugu wanagsan—waxa kale oo uu abuuraa ololeyaal xayaysiis ah si uu kor ugu qaado qoraalada lagu beegsanayo aagagga kale ee wakhtiga iyo wadamada.
Tirakoobka muhiimka ah ee Twitterka ee maskaxda lagu hayo marka la dhajinayo:
42% isticmaalayaasha Mareykanka waxay eegaan Twitter ugu yaraan hal maalin
25% isticmaalayaasha Mareykanka ayaa dhowr jeer maalintiiba Twitter-ka fiiriya
Dadku waxay ku bixiyeen celcelis ahaan 10 daqiiqo 22 ilbiriqsi booqashadiiba Twitter-ka sanadka 2019
Waa kan liiskayaga buuxa ee tirakoobka Twitter-ka 2021 (iyo tirakoobka Twitter-ka, sidoo kale.)
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu dhejiyo LinkedIn
Kooxda bulshada ee Hootsuite waxay heleen natiijooyin isku mid ah markii ay eegeen xogtooda dhejinta. Waqtiga ugu fiican ee ay ku dhejin karaan LinkedIn waa maalmaha shaqada inta u dhaxaysa 8-11 AM PST.
Iain Beable, Hootsuite's Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Bulshada ee Yurub, Bariga Dhexe iyo Afrika, wuxuu qabtaa joogitaanka LinkedIn ee Hootsuite. Waxa uu noo sheegay in iyada oo dhaqan ahaan lagu arkay wax qabad ka wanaagsan subaxii, qadada iyo fiidka, in tirooyinka ay ahaayeen kuwo si teel-teel ah u faafaya maalintaas dartiis.
"Inta badan dhagaystayaasheenna waxay joogaan Waqooyiga Ameerika, markaa waxaan u janjeeraa inaan qorsheeyo qoraallada subaxda hore PST," Beable ayaa yidhi. "Taasi waxay soo qabataa dadka EMEA fiidkii hore, taas oo u muuqata inay noo keenayso waxqabadka ugu fiican guud ahaan. Waxaan soo dhejin karnaa maalmaha fasaxa ah, sidoo kale, laakiin marka la dhimo, iyo subaxda dambe. Waxaan runtii arkayay ka qaybqaadashada soo hagaagtay fiidnimadii Axadda, sidoo kale."
Beable ayaa sheegay in ilaa iyo inta istaraatijiyad jadwal ka dambeeya ay socoto, "LinkedIn, aad bay u badan tahay xogta ay hogaamiso, hab imtixaan-iyo-barasho si aad u ogaato waxa shaqeeya. Jadwalkeena inta badan waxa uu ku salaysan yahay wixii hore u soo qabsoomay, waxaanu tijaabinay wakhtiyo kala duwan si aanu u aragno waxa ugu fiican”.
Beable ayaa intaas ku daray in khibradiisa Algorithm-ka LinkedIn, soo-dhawaynta ayaa ka yar tixgelinta tayada, ku habboonaanta, iyo nuxurka isbeddelaya.
"Waxaan soo dhejin karaa wax UK qadada, kaas oo helaya laga yaabaa in yar ka qaybgalka, ka dibna sida ugu dhakhsaha badan Waqooyiga Ameerika waa online, saacadood ka dib, si lama filaan ah hawlgelinta u dhex maraa saqafka, sababtoo ah Algorithm og yahay in ay khusayso kuwa isticmaala. Caadiyan dhagaystayaasheenu waxay weli arki doonaan boostada u dhow meesha ugu sarreysa quudkooda xitaa haddii ay saacado yar jirto."
- Iain Beable, Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Bulshada, EMEA
Tirakoobyada muhiimka ah ee LinkedIn ee maskaxda lagu hayo marka la dhajinayo:
9% isticmaalayaasha Mareykanka waxay hubiyaan LinkedIn ugu yaraan hal maalin
12% isticmaalayaasha Mareykanka waxay hubiyaan LinkedIn dhowr jeer maalintii
57% taraafikada LinkedIn waa mobilada
Waa kuwan liiska buuxa ee tirakoobka LinkedIn 2021 (iyo tirakoobka LinkedIn, sidoo kale.)
Sida loo helo wakhtiga ugu fiican ee lagu soo dhejiyo baraha bulshada
U fiirso marka dhagaystayaashaadu ay ugu firfircoon yihiin khadka
Algorithms-yada warbaahinta bulshada oo badan ayaa mudnaanta siiya soo dhawaynta. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah dadku waxay daneeyaan waxa cusub-gaar ahaan marka la eego inta jeer ee aan hubinno quudintayada maalmahan.
Soo dhejinta marka taageerayaashaadu ay online yihiin waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagula shaqeeyo (aan ka soo horjeedin) labadaba Facebook iyo Instagram algorithms. Markaad saadaaliso marka taageerayaashaadu ay u badan tahay inay baadhayaan quudintooda, waxaad kordhinaysaa fursadaha ay macluumaadkaagu gaadhi doonaan oo ay kula xidhidhi doonaan.
Twitter iyo LinkedIn, hoogtay, ha ka dhigin macluumaadka dhaqdhaqaaqa dhagaystayaasha ay heli karaan isticmaalayaasha, summada, ama xitaa dashboardka falanqaynta xaafaddaada saaxiibtinimo. Goobahan, cilmi baarista mudnaanta dhageystayaashaada iyo dabeecadahooda ayaa muhiim u ah.
Dhanka kale, xeeladahaaga Facebook iyo Instagram, ogaanshaha marka taageerayaashaadu ay online yihiin waa mid fudud sida fiirinta falanqayntaada. Waqtiga ugu Fiican ee Hootsuite ee Daabicida sifada, tusaale ahaan, waxay ku siinaysaa khariidad kulaylka saacadaha iyo maalmaha taageerayaashaadu firfircoon yihiin.
Qalabku wuxuu kaa caawinayaa inaad u isticmaasho xogta si aad u tijaabiso, adigoo soo jeedinaya waqtiyo wanaagsan oo aad ku dhejiso in summadaadu aysan isku dayin 30-kii maalmood ee la soo dhaafay.
U fiirso qoraalladaadii hore ee waxqabadka ugu sarreeya
Waxaad horeba u wanaajisay macluumaadkaaga si ay u waafaqdo yoolalkaaga waxqabadka warbaahinta bulshada. Marka ay timaado waqtiga go'aan qaadashada Goorma Si loo dhajiyo macluumaadkaas, waxaan ku talineynaa in la qaato hab xog-ururin si isku mid ah.
Talaabada ugu horeysa waa in aad eegto agabkaaga falanqaynta, ama warbixinada warbaahinta bulshada, oo aad eber geliso fariimahaaga guusha badan ee cabirka la siiyay. Qoraalada sida ugu wanagsan uga faa'idaystay marka la eego:
Wacyigelinta (tusaale ahaan, qoraallada leh aragtiyo sare)
Ka-qaybgalka (tusaale, qoraallada kasbaday heerarka ka-qaybgalka ee cajiibka ah)
Iibinta/Gaadiidka (tusaale, boostada soo jiidatay dhagsi badan)
Marka xigta, eeg wakhtiga maalinta ama toddobaadka ee aad dhejisay nuxurka guusha leh, oo arag nooca hababka.
Talo Pro: Hootsuite Analytics'Waqtiga ugu Wanaagsan ee la Daabici karo sifada ayaa si toos ah u soo jiidata taariikhdaada dhejinta gaarka ah, iyada oo aan wax xog ah lagu burburin, oo ay soo jeedisaa wakhtiyada la soo dhejiyo si loo kordhiyo ROI kaaga.
Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad aragto wakhtiyadaada ugu fiican ee aad ku dhejiso iyada oo ku saleysan riyooyin, ka qaybqaadasho, ama xidhitaannada isku xidhka (qalabka intooda badani waxay ku tusayaan oo kaliya).
Xogtan ayaa markaa la jiidi doonta Qorsheeyaha, markaa marka aad qorsheynayso qoraallada toddobaadka soo socda, waad awoodi kartaa si toos ah u arag wakhtiyada la soo jeediyay in la dhejiyo iyadoo lagu saleynayo taariikhda waxqabadkaaga warbaahinta bulshada ee gaarka ah (qalabka badankood waxay ku taliyaan kaliya iyadoo lagu saleynayo waqtiyada ugu wanaagsan adduunka ee la dhejiyo).
Hubi quudinta tartamayaashaada si aad u aragto waxa ay ku jiraan. Samee sahan ku saabsan qoraaladooda waxqabadka sare leh (ama xitaa samee falanqaynta tartan bulsheed oo buuxda) oo arag waxa qaababka soo baxay, ama laga yaabo in ay dib u rogaan xeeladaha tartamayaashaada.
Halkan Hootsuite, tusaale ahaan, waxaan baranay inaan iska ilaalino daabacaadda saacadda, sababtoo ah taasi waa marka calaamado badan ay dhajiyaan. Taa beddelkeeda waxaan ku dhejineynaa sumadda:15 ama :45 si aan u siino nuxurkayaga qol yar oo neefsasho ah.
Way mudan tahay in aad dhegta u dhigto dhulka warshadahaaga, haddii aad barato xeelado mudan in lagu daydo, ama aad aragto dhibbashooyinka qaarkood si aad isaga ilaaliso. (Xitaa waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso inaad ku darto jadwalka daabacaadda dadaalkaaga dhegeysi bulsho ee socda.)
Ku dheji aagga wakhtiga dhagaystayaashaada, ma aha kaaga
Haddi aad hiigsanayso inaad dadka qabato inta lagu jiro kitaabka sariirta subixii ee indha guduudan, dhajinta 6AM waxay macno fiican samaynaysaa. Dabcan, haddii dhagaystayaasha bartilmaameedka ahi ay ka kooban yihiin maamulayaasha hal-abuurka cusub ee Yurub, iska hubi inaad jadwal u sameysatid boostada 6AM Waqtiga Bartamaha Yurub (ama xitaa ka hor haddii aad rabto inaad hubiso inaad qabsato Bariga Yurub, sidoo kale.).
Hootsuite, kanaaladayadu waxay ku dadaalaan inay qabtaan dadka Waqooyiga Ameerika (PST ilaa EST) iyagoo dhajinaya subaxda ama galabnimada hore, Waqtiga Baasifigga. Kanaalka doonaya inay qabtaan UK, subaxda hore, ayaa u fiican.
Dhanka kale, summadaha leh dhegaystayaal la taaban karo oo ku sugan gobol gaar ah ayaa laga yaabaa inay tixgeliyaan abuurista gacan gaar ah dhagaystayaashaas. (Tani waxa laga yaabaa inay leedahay faa'iido dheeraad ah oo kuu ogolaanaysa inaad ku dhejiso luqad bartilmaameed ah, sidoo kale.)
Ikhtiyaar kale oo loogu talagalay kuwa adiga ah ee leh saldhigga macaamiisha caalamiga ah waa daabacaadda waxyaabaha ku jira saacad kasta. (Xaaladdaas, waxaan xaqiiqdii kugula talineynaa jadwaliyaha warbaahinta bulshada.)
Tijaabi oo hagaaji
Waqti go'an, waxaad samaysay dadaal badan oo aad awoodid, waana waqtigii aad burburin lahayd badhanka daabacaadda (ama jadwalka) oo aad aragto waxa dhacaya. Laakiin maxaa dhacaya haddii natiijadu aysan ahayn wixii aad rajaynaysay?
Qaar ka mid ah imtixaanada A/B ee habaysan (halka aad ku dhejiso qoraal isku mid ah waqtiyo kala duwan si aad u aragto wakhtiga uu ku kasbado natiijooyinka ugu fiican) ayaa iftiimin kara.
Sida Nick Martin u leeyahay, "Mid ka mid ah hal-ku-dheggayadayadu waa "Mar walba tijaabi"-marka waxaan si joogto ah u tijaabineynaa doorsoomayaal badan, hadday taasi tahay sawirada aan doorano, koobiyo, ama waqtiga aan ku dhajino."
La socoshada isbedelada
Baraha bulshada ayaa had iyo jeer isbedelaya, sidoo kale dadka isticmaala. Tusaale ahaan, u qaxitaanka shaqada fog ee muddada 2020 waxay keentay isticmaalka baraha bulshada oo soo noqnoqda.
Caadooyinka waxay ka beddeleen hubinta quudinta xilliga qadada una beddeleen hubinta inta u dhaxaysa shirarka soo-dhoweynta. Haddii dhegeystayaashaadu isbeddelayaan, xeeladdaadu waxay u baahan kartaa inay iyaduna beddesho.
Halkan Hootsuite, tusaale ahaan, dhab ahaantii ma beddelno wakhtiyada aan soo dhajino marar badan. Waxaa laga yaabaa in rubucii hal mar, sida uu qabo Cohen.
Laakiin isla mar ahaantaana, wuxuu ku daray: "Waxaan eegnaa qoraalladayada waxqabadka ugu sarreeya toddobaad kasta si aan u go'aamino haddii ay jiraan wax xog ah oo halkaas ku yaal oo na siin kara fikrado si aan dib ugu shaqeyno istiraatiijiyadeena ama dhajinta caddaynta."
Martin wuxuu ku daray: "Twitterka, waxaan ku eegnaa falanqaynta waqtigeyga bil kasta, laakiin marar dhif ah ayay isbeddelaan, marka ay sameeyaanna maaha wax la yaab leh. Taasi waxay tidhi, xaqiiqdii waxaan dib u eegis ku samaynaa wakhtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo ololayaasha wakhtiga xaddidan. Tusaale ahaan, waxa aanu ogaanay in maalinta caalamiga ah ee haweenka ay aad caan uga tahay UK, xataa in ka badan marka loo eego Waqooyiga Ameerika, sidaa awgeed waxa aanu u bedelnay cadayntayada daabacaada wakhti hore, in aanu garaacno 9AM-12PM gudaha UK”.
Furaha ayaa ah inaad ka fikirto wakhtiga inuu yahay mid muhiim ah, laakiin doorsooma, markaad sii waddo hagaajinta istaraatiijiyadaada jadwalka warbaahinta bulshada.
Qodobbada muhiimka ah ee ku saabsan waqtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo warbaahinta bulshada
Gebagebadii, ma jiro caalim guul darro ah wakhtiga ugu wanaagsan ee lagu dhejiyo baraha bulshada. Waqtiga ugu wanaagsan summadaadu waa sida dhagaystayaashaada oo kale, waana uga duwan tahay kanaal kasta.
Laakiin xogta saxda ah, wanaajinta jadwalkaaga dhejinta waxay keeni kartaa natiijooyin dhab ah waxayna wanaajin kartaa ROI-gaaga bulsho.
Twitter iyo LinkedIn, fiiro gaar ah u yeelo waxqabadkii hore ee boostada
Instagram-ka iyo Facebook-ga, u fiirso waxqabadkii hore ee boostada iyo marka taageerayaashaadu online yihiin
Soo hel waqtiyadaada ugu fiican ee aad ku dhejin karto warbaahinta bulshada addoo isticmaalaya Hootsuite Waqtiga ugu Wanaagsan ee Daabacaadda feature. Wanaaji jadwalkaaga iyadoo lagu salaynayo marka ay u badan tahay inaad ka faa'iidaysato:
Isku xirka gujinta
Ka saar mala-awaalka marka aad ku dhejinayso baraha bulshada addoo isticmaalaya Hootsuite Waqtiga ugu Wanaagsan ee Daabicida sifada.
Goobaha Yahoo SMTP: Sida loogu xidho macmiilka iimaylka ama goobta WordPress
Sida loo kaydiyo fariimaha qabanqaabiyaha SMS?